चर्चित स्वीस बैंकमा कसरी खोल्न सकिन्छ खाता ? कति लाग्छ शुल्क ? « Clickmandu
सो बैंकका खाता खोल्न जाने व्यक्तिको खास पहिचान हुँदैन । बैंकले एउटा निश्चित नम्बर दिन्छ ।
जस्तै, ‘क’ बहादुर नामको व्यक्तिले सो बैंकका खाता खोल्यो भने बैंकले मिस्टर ८२८५ कुलब्वाई नाम दिन्छ ।
बैंकमा खास बैंक खातावालाको नाम तथा उसको गोपनीयता भने बैंकसँग मात्रै रहन्छ । जबकी बैंकका अन्य कुनै कर्मचारीले पनि खातावालाको नाम थाहा पाउँदैनन् ।
सो बैंकका खाता खोल्ने काम आफैमा मुस्किलको काम हो । स्वीट्जरल्याण्डमा नै गएर खाता खोल्नुपर्यो भने १ लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ । अकाण्ट मेन्टिनेम्सका लागि ३०० अमेरिकी डलर लाग्दछ ।